prostatitis & Seborrheic alopecia>
Medoncare नयाँ प्रविधि अनुसन्धान गर्न प्रतिबद्ध, नयाँ लागूऔषधको र चिकित्सा समाधान को विकास. कोर व्यापार रूपमा आईपी मूल उपलब्धि.
सम्पर्क Medoncare कुनै प्रश्न संग, टिप्पणी वा चिन्ता तपाईँले हाम्रो उत्पादनहरु हुन सक्छ.
समय: 2019-09-12 दृश्य:
क्रोनिक prostatitis लागि जारी कि प्रोस्टेट एक सुनिंनु छ3महिना वा अब. यसलाई अहिले मानिसहरू लागि सबैभन्दा पीडादायी स्वास्थ्य समस्या को एक बन. यसलाई यौन कार्य असर र मूत्र रोग हुन सक्छ.
दीर्घकालीन prostatitis को प्रकार
त्यहाँ क्रोनिक prostatitis दुई फरक प्रकार हो, जो अवस्थाको कारण द्वारा फरक.
पुरानो जीवाणु prostatitis
प्रोस्टेट एक जीवाणु संक्रमण पुरानो जीवाणु prostatitis गराउँछ. केही मानिसहरू मा, यो संक्रमण एक मूत्र संक्रमण निम्न विकास वा तीव्र जीवाणु prostatitis लागि उपचार.
पुरानो गैर-जीवाणु prostatitis, या पुरानो pelvic दुखाइ सिंड्रोम (सीपी वा CPPS)
यो prostatitis को सबै भन्दा साधारण प्रकार छ. तर सही कारण अज्ञात छ. यो व्यवहार गर्न गाह्रो हुन सक्छ कि लक्षण को एक किसिम को कारण. डाक्टर शक यो एक पूर्व संक्रमण वा सानो चोट सुनिंनु गराउँछ कि कारण हुन सक्छ.
तपाईं अनुभव prostatitis को लक्षण अवस्था कारण निर्भर हुनेछ. वी डी तपाईं दुखाइ वा जलन अनुभव हुन सक्छ, राति बारम्बार urinate गर्न आवश्यक, कठिनाई वी डी, र रक्तपातपूर्ण वा बादल मूत्र। तपाईं आफ्नो तल्लो फिर्ता मा दुखाइ हुन सक्छ, कमर र तिध्रा बिचको भाग, वा भुँडी, को testicles वा लिंग, वा scrotum र मलाशय बीच अन्तरिक्ष मा। फटना पनि क्रोनिक prostatitis संग मान्छे को लागि पीडादायी हुन सक्छ।
दीर्घकालीन prostatitis लागि उपचार
उपचार तपाईंसँग निदान छन् संक्रमण प्रकार निर्भर हुनेछ. पुरानो जीवाणु prostatitis लागि, एन्टिबायोटिक एक दीर्घकालीन पाठ्यक्रम सामान्यतया पहिलो उपचार छ. तपाईं चार छ सप्ताह लागि एन्टिबायोटिक लिन आवश्यक हुन सक्छ. बारेमा 75% पुरानो जीवाणु prostatitis अवस्थामा को एंटीबायोटिक उपचार संग खाली.
सीपी वा CPPS अधिकांश अवस्थामा, अवस्था कारण अज्ञात छ. उपचार सामान्यतया कम वा लक्षण हटाउन दबाइहरु प्रयोग समावेश यो हालतमा. मांसपेशी relaxers, painkillers, र विरोधी-फिक्री दबाइहरु सामान्यतः दुखाइ लागि निर्धारित छन्.
परम्परागत चिनियाँ औषधीय (TCM) दीर्घकालीन prostatitis लागि उपचार
को आविष्कार द्वारा disclosed परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा inducing आगरणको को प्रभाव छ, ताजा, सक्रिय Qi-बगिरहेको, expelling ठहराव, hyperactive कलेजो दबा, invigorating मृगौला, disinfecting, sterilizing, लाभ Qi, रगत र जारी सुनिंनु सक्रिय.
परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा को विभिन्न सक्रिय सामाग्री को वैज्ञानिक अनुकूलता बुझ्छ परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा, कार्य को छिटो शुरू को लाभ छ, कुनै विषाक्तता वा साइड इफेक्ट र स्थायी प्रभाव र एक अपेक्षाकृत ठूलो हदसम्म एक विरामी दुःख राहत सक्नुहुन्छ.
Prostatitis बचाव दिशा सुझावहरू
निम्न सुझावहरू बस तपाईंलाई मदत गर्न लिन सक्छ preventative उपाय विकास prostatitis आफ्नो संभावना कम गर्न केही छन्. थप जानकारी र आफ्नो जोखिम कम गर्न मद्दत तरिकाहरू, तपाईं आफ्नो डाक्टर संग एक परामर्श सेट अप गर्नुपर्छ.
थप पानी पिउन: ठीक hydrated रहन राम्रो प्रोस्टेट स्वास्थ्य कायम राख्न लागि आवश्यक छ. निर्जलीकरण र मूत्र संक्रमण prostatitis लागि जोखिम कारक हो र लक्षण worsen गर्न सक्नुहुन्छ.
अभ्यास राम्रो सरसफाइको: निकै संक्रमण आफ्नो जोखिम कम आफ्नो लिंग र आसपास क्षेत्र सफा गर्न सक्छन् राख्न.
कैफीन सेवन कम: Caffeinated पेय र आफ्नो प्रोस्टेट रीस उठाउनु र prostatitis को लक्षण worsen गर्न सक्नुहुन्छ.
अभ्यास सुरक्षित सेक्स: केही यौनजन्य रोगहरू, यस्तो gonorrhea रूपमा, जीवाणु prostatitis हुन सक्छ. सुरक्षित सेक्स अभ्यास, एक कंडोम प्रयोग गरेर, prostatitis लागि आफ्नो जोखिम कम तिर मदत गर्नेछ.
व्यायाम: नियमित शारीरिक गतिविधि prostatitis र सुनिंनु दुवै को रोकथाम मा एक विशाल प्रभाव हुन सक्छ.
थप फल र तरकारी उपभोग: फल र तरकारी एंटीओक्सिडेंट को उच्च स्तर समावेश, लड संक्रमण र सुनिंनु मा गर्न मद्दत गर्नेछ भिटामिन र अन्य पोषक तत्व
एक स्वस्थ वजन कायम: वजन भएको हुँदा समग्र प्रोस्टेट स्वास्थ्य गर्न हानिकारक छ. ती अनावश्यक पाउण्ड केही बगाउन प्रयास बनाउन.
अघिल्लोHypothyroidism, थप र थप महिला को लागि एक स्वास्थ्य खतरा
अर्कोपुरुष seborrheic alopecia (बाल seborrheic हानि)